Raw Methasteron (Superdrol) poda Vagadziri & Vanotengesa - Fekita
Methasteron (Superdrol) powder, inozivikanwawo seSydrol kana methyldrostanolone imwe yesimbi yakasimba inobata vanabolic-androgenic steroid (AAS) kunze uko.
Raw Methasteron (Superdrol) powder is an anabolic steroid. Nokuda kwekuvaka muviri / kutamba mitambo Raw Methasteron (Superdrol) inowedzera huwandu hwe testosterone hunoita kuti kuwedzerwa kukuru kuve mumuviri uye ukuru, kunyanya nekuda kwekukwanisa kuwedzerwa nhamba yako yemasikisi.
Raw Methasteron (Superdrol) powder (3381-88-2) Tsanangudzo
Izvi zvingangoita kuti Methasteron ive inoshamisa uye isrogen, asi inosanganisirawo dzimwe tsika dzechirotero steroid yakadai se: kuwedzerwa tsvuku yeropa (RBC); yakagadziridzwa kutsungirira panguva yekurovedza muviri kuburikidza nepamutemo lactic acid clearing; oxygen yakagadziriswa uye inovaka muviri kunoshandiswa mumashonga ekushanda nesimba; zviri nani mushure glycogen kudzorerwa mushure mekuita zvekudzidzira kuti kukurumidze kupora uye; iyo inhibition ye catabolism (musisi kuparadzwa).
Raw Methasteron powder is steroid anabolic inotakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvichienzaniswa nevana vanalic steroid. Raw Superdrol powderitself inongova zita rechirwere chepamusoro peaneralic steroid inotengeswa sepro hormone kana kuti kudya kunovaka muviri neAnabolic Extreme.
Kemikari Name 2, 17-Dimethyldihydrotestosterone; 17-hydroxy-2, 17-dimethylandrostan-3-imwe
muchiso Name Superdrol, 17a-Methyl-Drostanolone,
Molecular Wsere 318.49
Kunyorera Point 223-225 ° C
Birara Point 423.8 ° C pa 760 mmHg
Biological Half-Life 8-12 maawa
Raw Methasteron (Superdrol) powder Application Kuvaka muviri
Chii chinonzi Raw Methasteron (Superdrol) powder (3381-88-2)?
Iyo Yakakura Methasteron (Superdrol) powder (3381-88-2) mabasa
Apo patinotaura nezve Superdrol dosage, tinofanira kuchengeta mupfungwa kuti zvinangwa zvemuviri zvinopesana nomunhu nemunhu. Apo mumwe angada kuwedzera, chimwe chinangwa chinogona kunge chiri kucheka. Zvose mune zvose zvinowanzoitwa Superdrol dhijeni ye20-30mg kwemavhiki anenge mana kusvika matanhatu yakakwana kuti ikupe zvinangwa zvisingatauri utano hwako huri pangozi.
Vazhinji vashandisi ve Superdrol vanoti vasati vasarudza dhigirii Superdrol, iwe unofanira kuchengetedza kukwana kwakanaka pakati pematambudziko anowanikwa uye nemigumisiro. Unogona kuenda kusvika ku40mg kana uchida. Neichi chiyero, iwe uchawana humwe hutsika uye hunobudirira simba usingakanganwi Superdrol nemigumisiro zvakare. Hazvina kukodzera.
Raw Methasteron (Superdrol) powder (3381-88-2) zvinobatsira
Kana iwe wakafunga nezvekudurura mamwe mapaundi, Superdrol inofanira kunge yakasvika mupfungwa dzako kutanga. Pasinei nokuti wakaedza kudya, kudzidzisa kana kuti zvose zviri zviviri, ungangodaro wakaona kuti unoda chimwe chinhu chinowedzera. Nenzira yakanaka, Superdrol inobatsira iwe kuderedza uremu zvakanaka. Icho chimwe chezvinhu zvinogona kuvimbwa.
Iyo Superdrol bulking effect inoshanda zvikuru iyo kana iwe ukasarudza kutenga Superdrol powder, iwe haungambofi wakatarisa kumashure. Ndinogona kutaura nechivimbo kuti kana iwe uchitaura kuti uri muvhareji kana usina musumbu, steroid ino ichakubatsira iwe kuvaka muviri wakasimba wamuri kutarisira.
Sezvambotaurwa kare Superdrol bulking effect inokonzerwa nekuwedzera kweprotini synthesis uye nitrogen retention. Zvose izvi zvinowedzera mukudengenyeka, uye ndicho chikonzero nei Superdrol yekuvaka muviri kuwanikwa kuchakubatsira iwe mukurumbira zvose paimba yekurovedza uye kune kubasa kwako. Uine izvi mupfungwa, haungarambi uchishamisika kuti nei masimba ako ari kuwedzerwa kune rimwe zuva.
Tenga Methasteron (Superdrol) powder kubva kuBuasas.com